Fahasamihafana eo amin'ny endri-javatra sy ny toetra mampiavaka | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny endri-javatra sy toetra mampiavaka | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Fitenenana / Teny / Fahasamihafana eo amin'ny endri-javatra sy ny toetra mampiavaka azy
30 Mey 2016 Narotsak'i Nedha
Fahasamihafana lehibe - Endri-javatra vs Toetra mampiavaka azy
Ny endri-javatra sy ny toetra dia teny roa izay mety mifandona na dia misy fahasamihafana lehibe aza eo amin'ireo teny roa ireo. Rehefa miresaka momba ny olona iray, ny maha samy hafa ny endri-javatra sy ny toetra iray dia ny fiasa iray hilazana ampahany miavaka amin'ny tarehy, fa ny toetra amam-panahy dia manondro toetra iray izay mahazatra ny olona iray . Midika izany fa ny mahasamihafa ny teny roa dia ny hoe na dia mirona ivelany aza ny singa iray dia tsy ny toetra mampiavaka azy.
Inona avy ireo endri-javatra?
Ny endri-javatra dia manondro ireo ampahany miavaka amin'ny tarehy. Anisan'izany ny maso, orona ary vava. Rehefa milaza isika fa manana endrika tsara tarehy ny olona iray dia entina ilazana ireo ampahany miavaka manintona ilay olona izy.
Ny masony no mampiavaka azy indrindra.
Manana endrika mahafinaritra izy.
Ankoatr'izay, ny teny hoe fampiasa dia azo ampiasaina hanondroana dikany marobe.
Kalitao na ampahany miavaka
Ny rava amin'ny trano mimanda no mbola mampiavaka azy.
Inona avy ireo fiasa samihafa amin'ity maodely ity?
Ampahan'ny trano na faritra iray
Nahaliana ny mpizaha tany ny fiasa voajanahary amin'ny ala honko.
Ny kianja filalaovana anaty trano no tena mahavariana.
Manintona manokana amin'ny fialamboly
Ny endri-javatra omaly dia sarimihetsika noforonina siansa vaovao.
Ilay sarimihetsika dia nanasongadina ilay mpilalao sarimihetsika vaovao ho maodely malaza eran-tany.
Inona avy ireo toetra mampiavaka azy?
Ny toetra iray dia manondro toetra iray izay mahazatra ny olona iray. Ohatra, ampahatsiahivo ao an-tsainao ny namanao akaiky indrindra na olona iray ao amin'ny fianakavianao, ary eritrereto ireo toetra ananan'izy ireo. Ho afaka hanan-toetra samihafa ianao toy ny hatsaram-panahy, malala-tanana, mampihomehy, mahasosotra, matotra, tezitra, sns. Ireo dia azo raisina ho toetra mampiavaka azy.
Ny faharetana no toetrany tsara indrindra.
Ny fialonana dia toetra maharikoriko.
Ary koa, ny toetra mampiavaka azy dia azo ampiasaina hilazana toetra iray miavaka amin'ny olona na vondrona iray .
Ny hoe mifaly amin'ny fotoana rehetra dia iray amin'ireo toetra mampiavaka ny Bennets.
Ny toetra mampiavaka azy dia azo ampiasaina hamoahana ny hevitry ny zavatra iray mahazatra .
Ny tsiro matsiro dia mampiavaka ny ankamaroan'ny lovia aziatika atsimo.
Inona no maha samy hafa ny Features sy ny mampiavaka?
Famaritana ny endri-javatra sy ny toetra:
Endri-javatra: fampiasa iray hilazana ampahany miavaka amin'ny tarehy.
Toetra mampiavaka: ny toetra mampiavaka dia manondro toetra iray izay mahazatra ny olona iray.
Mampiavaka ny endri-javatra sy ny toetra:
Endri-javatra: amin'ny lafiny isam-batan'olona, ​​ny fiasa dia ivelany, toy ny maso, orona, vava sns.
Toetra mampiavaka azy: anatiny ny toetra mampiavaka azy.
Endri-javatra: ny teny dia azo ampiasaina hilazana toetra na ampahany miavaka, ampahany amin'ny tranobe na faritra na manintona manokana amin'ny fialamboly.
Toetra mampiavaka azy: ny teny dia azo ampiasaina hilazana toetra iray miavaka amin'ny olona na vondrona na hamoahana ny hevitry ny zavatra iray mahazatra.
1. Tovovavy tsara tarehy manao akanjo mainty Nosoratan'i Tibchris [ CC BY 2.0 ], avy amin'ny Wikimedia Commons
2. Sakafo tsena Thai 01 By Takeaway - Asa manokana, [CC BY-SA 3.0], avy amin'ny Wikimedia Commons
Fahasamihafana eo amin'ny fandaminana sy ny orinasa Fahasamihafana eo amin'ny evolisiona sy ny revolisiona Fahasamihafana eo amin'ny tanjona sy ny tanjona Fahasamihafana eo amin'ny trano sy ny varotra Fahasamihafana eo amin'ny olana sy ny olana
Filed Under: Words Tagged With: Toetra mampiavaka , famaritana toetra, dikany toetra , mampitaha endri-javatra sy toetra , endri-javatra , endri-javatra sy ny mampiavaka ny toetra , famaritana endri-javatra, dikany endri-javatra , endri-javatra vs toetra.
Momba ny mpanoratra: Nedha
Nedha dia nahazo diplaoma tamin'ny sosiolojia ary manana mari-pahaizana ambony momba ny psikolojia. Ny tanjon'ny fikarohana dia ny sehatry ny sosiolojia, ny linguistics Applied, ny Sociolinguistics ary ny anthropology Linguistic. Mpampianatra izy izao
Fahasamihafana eo amin'ny governemanta fanjakana sy ny governemanta Union ao India
Fahasamihafana eo amin'i Vas Deferens sy Vasa Efferentia
Fahasamihafana eo amin'i Sikh sy Silamo
Fahasamihafana eo amin'ny fiaraha-miasa sy ny isam-batan'olona
Fahasamihafana eo amin'i Acrania sy Craniata